14 -ka Sebtember waxaan ugu dambayn arki doonaa AirPods -ka cusub 3 | Waxaan ka imid mac
14 -ka Sebtember waxaan aakhirka arki doonnaa AirPods -ka cusub 3
Xanta, xanta. Qof caan ah oo ka dillaacay Apple, Max Weinbach, ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dhacdada Apple ee soo socota «California qulqulka»Toddobaadka soo socda, waxaan aakhirka arki doonnaa jiilka saddexaad ee AirPods.
Waxa kale oo uu filayay warar kale oo ah in Tim Cook iyo kooxdii la shaqaynaysay ay na tusi doonaan dhacdada maalintaas la sheegay Sebtember 14. Kuwani waa qaar ka mid ah astaamaha iPhone 13 -ka cusub ee lagu soo bandhigi doono dhacdadan. Waan arki doonaa inay run yihiin iyo in kale.
Ka dib ku dhawaaqista rasmiga ah ee Apple ee dhacdada loogu magac daray "California streaming" oo la qaban doono 14ka Sebtember, Max weinbach ayaa lagu daabacay akoonkiisa Twitter wararka qaar oo aan ku arki doonno qodobka muhiimka ah.
Midkood ayaa xaqiijinaya in Apple ay ugu dambayn soo bandhigi doonto jiilka saddexaad ee AirPods. Ku xisaabtama in dib-u-eegiddan cusub ee taleefoonnada gacanta ee ugu iibinta badan ee shirkaddu ay kor u qaadday codka, iyo madaxbannaani weyn.
Wuxuu sheegay in codka la hagaajiyay, gaar ahaan xabaalaha. Marka laga hadlayo madaxbannaanida weyn, waxaa mahad leh xaqiiqda ah in baytariga kiiska lacag -la'aanta ah uu 20% ka weyn yahay kan hadda jira. Beteriyada gudaha ee dhagaha -dhegaha ayaa la mid ah kuwa AirPods Pro.
Iyada oo ku habboon carqaladeynta dhacdadii Apple ee Sebtember, waxaan daabaceynaa warbixinteena ku saabsan badeecadaha soo socda ee Apple, oo ay ku jiraan iPhone 13, Apple Watch Series 7 iyo 3rd Generation AirPods.
Waa tan waxa ay tahay inaan wadaagno
- Fiin (@PineLeaks) September 7, 2021
Isagoo sii wata arrinta bateriga, wuxuu sidoo kale tilmaamayaa kuwa kuwa Apple Watch Taxanaha 7 way ka weyn yihiin kuwa hadda jira. Marka hore, sababta oo ah baaxadda weyn ee saacadda lafteeda, iyo tan labaad, sababta oo ah processor-ka cusub ee “S7” wuu ka yar yahay oo laba-geesood ah si uu uga tago boos badan batteriga.
Marka laga hadlayo baytariyada iPhones -ka cusub, Weinbach wuxuu tilmaamayaa inay weynaanayaan marka loo eego kuwa hadda jira. Tusaalaha ugu cad ayaa ah kan iPhone 13 Pro Max, kaas oo 18-20% ka weyn kii ka horreeyay.
Wax yar baa ka hadhay in la ogaado haddii saadaasha Max Weinbach ay run tahay. Wararka kale ee laga helayo ilo kale ayaa tilmaamaya isla, sidaa darteed waxaan sugi doonnaa inaan aragno haddii Talaadada soo socota aan aragno Tim Cook oo jeebkiisa kala soo baxaya AirPods cusub….
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » 14 -ka Sebtember waxaan aakhirka arki doonnaa AirPods -ka cusub 3
Ku raaxayso 3 bilood oo bilaash ah Amazon Music HD
Filimka Rocks waxaa lagu sii dayn doonaa DVD iyo Blu-Ray Oktoobar 26